Home Wararka Farmaajo oo wakiil ka ah Abiy Axmad aya codsi u gudbin doono...
Farmaajo oo wakiil ka ah Abiy Axmad aya codsi u gudbin doono dowladda Talyaaniga. Waa Maxay…?
Madaxweyne Farmaajo aya waxa uu codsaday in uu kulan qaasa oo ayan cidna ku wehlin la qaato Ra’iisal Wasaaraha Dalka Talyaaniga Mudane Giuseppe Conte. Codsiga kulankaas aya laga aqbalay laakiin xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga aya u sheegay Farmaajo in uu isaga kaligii imaan karo hadii uu doono laakiin Ra’iisal Wasaare Giuseppe Conte ay la imaan doonaan mas’uuliyiin ka socoto xafiiskiisa iyo Wasaaradda Arimaha Dibadda ee dalka Talyaaniga. Waxaa sidoo kale loo sheegay in la isku dayi doono in loo ogolaado in uu mudo ka yar afar daqiiqo uu si qaara ula istaago RW Giuseppe Conte iyada oo aan la garab taagnaynin.
Waxa ay dowladda Talyaaniga aad ula yaabtay sababta ku kalifeysa in MW Farmaajo uu kulan qarsoodi ah ka codsado dalka Talyaaniga. Agaasime ku xigeenka qaybta Afrika mudane Giuseppe Mistretta ayaa sheegay in ay isku dayi doonan in ay waqti u heelaan isla markaana tixgaliyaan codsiga MW Farmaajo.
Ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa u xaqiijiyay Muqadishu Online in uu RW Abiy Axmed uu fartiin ugu dhiibay Madaxweyne Farmaajo dalka Talyaaniga taas oo ah in uu ku weydiiyo dalka Talyaaniga in ay ku taageeraan siyasad iyo mid dhaqaale isbaheysiga sadax geesoodka ah ee u dhaxeeya Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritereeya. Sidoo kale MW Farmaajo waxa uu u gudbin doonaa Dowladda Talyaaniga casuumad uu ku martiqaadayo dowladda Talyaaniga in ay wafdi u soo diraan kulanka sadaxaad
Previous articleFarmaajo oo codsaday in uu kulan la qaato Amirka Qatar oo ku sugan dalka Talyaaniga?
Next articleGabar uu dhalay Donald Trump oo taageero weyn u muujisay Ilhaan Cumar!!
Afgambi dhicisoobay oo ka dhacay dalka Suudaan
Dhallinyarda laga iibiyey Itoobiya, Eratariyana ay Dullaalka ka ahayd waa in...